အာဖဂန်နစ္စတန်အရေး ကုလဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ မြန်မာ့အရေးကို ယှဥ်တွဲ ဆန်းစစ်ခြင်း - ข่าวสด
အာဖဂန်နစ္စတန်အရေး ကုလဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ မြန်မာ့အရေ...
အာဖဂန်နစ္စတန်အရေး ကုလဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ မြန်မာ့အရေးကို ယှဥ်တွဲ ဆန်းစစ်ခြင်း
13 ก.ย. 2564 - 22:00 น.
ကုလအထွေထွေညီလာခံရဲ့ အဓိက ခေါင်းခဲစရာ နှစ်နိုင်ငံ မြန်မာနဲ့ အာဖဂန်နစ္စတန်
အခုနှစ် ကုလသမဂ္ဂ အရည်ချင်းစစ်ကော်မတီ အတွက် ခေါင်းခဲစရာထဲမှာ တာလီဘန်တွေရဲ့ လျှောက်ထားမှု အပြင် ၊ မြန်မာအရေးလည်း ထိပ်ဆုံးက ပါဝင်တယ်လို့ နိုင်ငံတကာ အကဲခတ်တွေက ပြောကြပါတယ်။
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်ကို မြန်မာ စစ်တပ်က အသိအမှတ် မပြုဘဲ ဖေဖေါ်ဝါရီလဆန်းမှာ စစ်အာဏာသိမ်းပြီး ရှိလက်စ ရွေးကောက်ခံ ဗဟို အစိုးရ အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေ၊ တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ် အစိုးရ ခေါင်းဆောင်တွေ အားလုံးနီးပါးကို ဖမ်းဆီး ထားပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂမှာ ရှိလက်စ မြန်မာ ကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်မိုးထွန်းက စစ်အာဏာ သိမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်ကြောင်း ဖော်ထုတ် ရပ်တည်လာတဲ့နောက် အာဏာသိမ်း စစ်တပ်က သူ့ကို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကိုယ်စားလှယ် မဟုတ်တော့ကြောင်း ကုလကို ပြောပါတယ်။ ကိုယ်စားပြုခွင့် ဘယ်သူ့ကို ပေးမလဲဆိုတာ အခု စက်တင်ဘာ ကုလ အထွေထွေ ညီလာခံတွေရဲ့ အစ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ အရည်ချင်းစစ်ကော်မတွေ ဖွဲ့ပြီး ဆန်းစစ်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိ အရတော့ ဦးကျော်မိုးထွန်းပဲ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အမြဲတမ်း ကိုယ်စားလှယ် တနည်းအားဖြင့် ကုလဆိုင်ရာ မြန်မာ သံအမတ် ဖြစ်တယ်လို့ မြန်မာ နိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလအထူးသံ မစ္စ ခရစ္စတင်း ရှရနာ ဘာဂနာက ပြောထားပါတယ်။
စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို တုံ့ပြန်ပြီး ဖွဲ့စည်းထားရှိလာတဲ့ မြန်မာအရေး အထူး အကြံပေးကောင်စီ SAC- M အဖွဲ့ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ မြန်မာအရေး ထဲထဲဝင်ဝင် လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ကုလ အဆင့်မြင့် အရာရှိတွေနဲ့ ဖွဲ့ထားတာပါ။
မြန်မာဆိုင်ရာ ကုလအထူးသံတမန်ဟောင်း မစ္စ ယန်ဟီးလီ၊ ဂျနီဗာ လူ့အခွင့်အရေး ကောင်စီက ဖွဲ့ခဲ့တဲ့ မြန်မာအရေး အချက်အလက် ရှာဖွေရေး အဖွဲ့ကို ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ မစ္စတာ မာဇူကီ ဒါရူဆလမ်နဲ့ အဖွဲ့ဝင် ခရစ္စ ဆီဒိုတီတို့ဟာ အခု SAC-M အဖွဲ့ကို ထူထောင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
စစ်အာဏာသိမ်း ပြီးနောက်ပိုင်း မြန်မာအရေး အနီးကပ် လေ့လာ ဆန်းစစ်ချက်တွေ အဲဒီ အဖွဲ့ဆီက ထွက်လာနေတာမှာ ကုလမှာ မြန်မာကို ကိုယ်စားပြုခွင့် ကိစ္စလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
– တရုတ်အထူးသံရဲ့ သီတင်းတစ်ပတ်ကျော်ကြာ နေပြည်တော် ခရီးစဥ်
– NUG အစိုးရဲ့ ဘတ်ဂျက်အခြေအနေ
– ကုလညီလာခံနီးလို့ NUG ရဲ့ ကြေညာချက်ထွက်လာတာလို့ စစ်ကောင်စီတုံ့ပြန်
SAC- M အဖွဲ့ရဲ့ သုံးသပ်ချက်အရ စစ်ကောင်စီ ခန့်တဲ့သူကို ကုလ အရည်ချင်း စစ်ကော်မတီက သဘောတူ ထောက်ခံပြီး ကုလ အထွေထွေ ညီလာခံက အတည်ပြု လက်ခံလိုက်တယ် ဆိုတဲ့ အချက်ကို လုံးဝ ပယ်ဖျက်တာမျိုး မလုပ်ပဲ ထွက်လာနိုင်သမျှ ဖြစ်နိုင်ခြေတွေထဲမှာ ထည့်သွင်း ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖြစ်နိုင်ခြေ နည်းတယ်ဆိုတဲ့ဘက်မှာ SAC-M အဖွဲ့ ရပ်တည်ပါတယ်။
အရည်ချင်းစစ် ကော်မတီကို ဘယ်လိုတွေ ဖွဲ့စည်းလည်း၊ လုပ်ငန်းစဥ် အဆင့်ဆင့်က ဘယ်လိုလဲ၊ မြန်မာအရေး ထွက်လာနိုင်ခြေ အားလုံးက ဘာတွေလဲ စတဲ့ အသေးစိတ် ဆောင်းပါးလည်း ဘီဘီစီက တင်ဆက် ထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
အခု ဆောင်းပါးထဲမှာတော့ အာဖဂန် အရေးနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး ကုလမှာ ဆုံးဖြတ်လေ့ ရှိခဲ့တဲ့ နမူနာတွေကို ကြည့်ပြီး မြန်မာအရေး အကြောင်း ပြောသွားမှာ ဖြစ်ပြီး၊ အရည်ချင်း စစ်ကော်မတီက အဓိက ဘယ်အချက်ကို ကြည့်တာလဲ၊ အရင် စစ်အစိုးရ လက်ထက်တွေမှာရော ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတွေ၊ ပြည်ပရောက် စင်ပြိုင် အစိုးရ အဖွဲ့တွေက ကုလမှာ မြန်မာကို ကိုယ်စားပြုခွင့်ရဖို့ မကြိုးစားကြဘူးလား၊ ဘယ်လို ရလဒ်တွေ ရှိခဲ့လဲ စတာတွေကို အာရုံစိုက်ပါမယ်။
၁၉၉၆ မှာ တာလီဘန်တွေ ကာဘူးလ်ကို သိမ်း
ကုလမျက်နှာစာမှာ အာဖဂန်နစ္စတန်ကနေရတဲ့ ဥပမာ
၁၉၉၆ စက်တင်ဘာမှာ အာဖဂန်နစ္စတန်ရဲ့ သမ္မတရာဘာနီ ဦးဆောင်တဲ့ အစိုးရက ကုလသမဂ္ဂ အတွက် အမြဲတမ်း ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ဘယ်သူဘယ်ဝါတွေ ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ အမည်စာရင်းကို ကုလ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ရုံးထံ တင်ပါတယ်။
မကြာခင် ရက်အနည်းငယ် အတွင်း အဲဒီ စက်တင်ဘာလထဲမှာပဲ ကာဘူးလ် မြို့တော်ကို တာလီဘန် တပ်ဖွဲ့တွေ ဝင်သိမ်းပါတယ်။ အာဖဂန်နစ္စတန်ရဲ့ အစိုးရ အဖြစ် တာလီဘန်တွေ ကြေညာပါတယ်။
၉၆ အောက်တိုဘာမှာတော့ ကုလ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးထံ တာလီဘန်တွေ စာပို့ပါတယ်။ သမ္မတရာဘာနီ ခန့်အပ်ထားတဲ့ ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဟာ အာဖဂန်နစ္စတန်ကို ကိုယ်စားမပြုဘူး ဆိုပြီး ရေးတာပါ။
အဲဒီ စာထဲမှာ တာလီဘန်တွေက ဘယ်သူတွေကိုဖြင့် ကုလကိုယ်စားလှယ်တွေ အဖြစ် ခန့်ထားတယ်ဆိုတာ မပါဝင်ပါဘူး။ အဲဒီလို မပါဝင်တဲ့ အတွက် ကုလ ဥပဒေရေးရာ ကောင်စီရဲ့ အမြင် အရ တာလီဘန်တွေဟာ ကုလကိုယ်စားလှယ် နေရာကို အပြိုင်လျှောက်ထားတာမျိုး မဟုတ်ဘူးလို့ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ပါတယ်။
– အာဖဂန် အစိုးရသစ်အဖွဲ့ တာလီဘန်ကြေညာ
– အာဖဂန်နစ္စတန်ကို အရေးပေါ်အကူအညီ ဒေါ်လာ ၃၁ သန်း ပေးဖို့ တရုတ် ကတိပြု
– တာလီဘန်တွေ တကျော့ပြန်လာခြင်းက နိုင်ငံတကာမှာ ဘယ်လို ရိုက်ခတ်မှုတွေ ရှိလာမလဲ
၅ နှစ်ဆက်တိုက် ရွှေ့ဆိုင်းခြင်း
ကုလသမဂ္ဂမှာ နိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုခွင့် ဆန်းစစ်တဲ့ အရည်အချင်း စစ်ကော်မတီ "Credentials Committee" အစည်းအဝေးမှာ နယ်သာလန်နဲ့ ရုရှားက ရာဘာနီ အစိုးရဟာ အာဖဂန်တရားဝင် အစိုးရ အဖြစ် ဆက်ရှိနေသေးတယ် ဆိုတဲ့ ရပ်တည်မှုကို ပြသပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ရာဘာနီ အစိုးရ တင်သွင်းတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေကို အသိအမှတ် ပြုခြင်းဟာ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပြီး သတိကြီးကြီးထားတဲ့ ချည်းကပ်မှု ဖြစ်တယ်ဆိုပြီး နယ်သာလန်နဲ့ ရုရှားတို့က ပြောကြပါတယ်။
အမေရိကန်ကတော့ အာဖဂန်နစ္စတန် နိုင်ငံရဲ့ ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ အသိအမှတ် အတည်ပြုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချက်ခြင်းမချမှတ်ပဲ ရွှေ့ဆိုင်းထားဖို့ အကြံပြုပါတယ်။ အရည်အချင်း စစ်ကော်မတီ ဥက္ကဌက သဘောတူပါတယ်။ ရွှေ့ဆိုင်းကြောင်း ဆုံးဖြတ်ချက် ချတဲ့အခါ အဓိပ္ပာယ်က လက်ရှိ အာဖဂန်နစ္စတန်ကို ကိုယ်စားပြု ခွင့်ရနေသူတွေသာ နောက်ဆုံးဖြတ်ချက် ထွက်မလာမချင်း ဆက်လက် ကိုယ်စားပြုခွင့် ပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၉၇ ကနေ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်အထိ ရာဘာနီအစိုးရရော၊ တာလီဘန်တွေရော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ အမည်စာရင်းကို ကုလထံ တင်သွင်းပါတယ်။ ကုလ အထွေထွေ ညီလာခံက ဆက်တိုက်ပဲ ဆုံးဖြတ်ချက် ချမပေးပဲ ရွှေ့ဆိုင်းနေခဲ့ပါတယ်။ အဓိပ္ပာယ်က သမ္မတရာဘာနီ အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ပဲ ကုလ အထွေထွေ ညီလာခံရဲ့ လုပ်ငန်း ဆောင်တာတွေမှာ ဆက်ပြီး ပါဝင်ခွင့် ရနေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၀၁ မှာတော့ ဘွတ်ရှ်အငယ်လက်ထက် စက်တင်ဘာ အလဲဗင်း တိုက်ခိုက်ခံရမှု အပြီး အမေရိကန်က အာဖဂန်နစ္စတန် နိုင်ငံထဲထိ ဝင်ပြီး စစ်ရေးအရ လက်တုံ့ပြန်ပါတယ်။ တာလီဘန်တွေကို ဖြုတ်ချပါတယ်။
အာဖဂန် ကြားဖြတ် အစိုးရ ပေါ်ပေါက်လာပြီး ၂၀၀၁ မကုန်ခင် ဒီဇင်ဘာမှာပဲ ကုလမှာ ကိုယ်စားပြုခွင့် တင်လာပါတယ်။ အဲဒီ အာဖဂန်ကြားဖြတ် အစိုးရက ခန့်အပ်တဲ့ သူတွေကို ကုလကလည်း လက်ခံလိုက်ပါတယ်။
ကာဘူးလ်ရဲ့ ဒုတိယအကြိမ် ကျဆုံးခန်း
တာလီဘန်တွေဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဩဂုတ်လထဲမှာပဲ ကာဘူးလ်ကို ပြန်သိမ်းနိုင်ပါတယ်။ အမေရိကန် ကျောထောက်နောက်ခံပြုပေးထားတဲ့ အာဖဂန် အစိုးရ ပြိုကွဲ ကျဆုံးသွားပြီးတဲ့ နောက် ကာဘူးလ်ကို အလွယ်ပဲ သိမ်းလိုက် နိုင်တာပါ။
အမေရိကန် အပါအဝင် နေးတိုးစစ်ရေးမဟာမိတ်တွေ အာဖဂန်မြေပေါ်ကနေ တပ်ရုပ် သွားပြီးတဲ့နောက် တာလီဘန်တွေ ထိုးစစ် မြှင့်လာပြီး လျှပ်တပျက် အတွင်းမှာ နိုင်ငံအနှံ့က အဓိက မြို့ကြီးတွေကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ တာလီဘန်တွေ ကာဘူးလ်အနီးထိ ရောက်လာစဥ်မှာပဲ သမ္မတဂါနီ ထွက်ပြေးသွားပါတယ်။
အခု တာလီဘန်တွေ အစိုးရ အဖွဲ့ ကြေညာပြီး ဖြစ်လို့ ကုလမှာ နိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုခွင့်ရဖို့ လျှောက်ထားလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၀ တုန်းကလိုပဲ စစ်ရေးနည်းနဲ့ အာဏာရယူတဲ့ တာလီဘန်တွေ အပေါ် အခုရော ဘယ်လို သဘောထားမှာလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းမျိုး ထပ်ပြီး ဖြစ်လာ ပြန်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တာလီဘန်ဟာ လူ့ အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခြင်း ဆိုင်ရာ စွဲချက်တွေနဲ့ အတူ အကြမ်းဖက် ဝါဒ၊ အစွန်းရောက် ဝါဒ စတာတွေနဲ့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ယှဥ်တွဲ မြင်ခံထားရသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံရေး ဇာတ်ခုံ နိုင်ငံကြီးတွေရဲ့ ရပ်တည်မှု အလှည့် အပြောင်းမှာတော့ အခုဆိုရင် တရုတ်၊ ရုရှား တို့လို့ အရည်ချင်း စစ်ကော်မတီထဲမှာလည်းပါဝင်၊ လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ အမြဲတမ်း အဖွဲ့ဝင်တွေလည်း ဖြစ်တဲ့ အဓိက အင်အားကြီး ၂ နိုင်ငံက တာလီဘန်နဲ့ကြား ဆက်ဆံရေး တည်ဆောက် ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ဒီတချီမှာတော့ တာလီဘန်ဟာ ကုလသမဂ္ဂ မျက်နှာစာမှာပါ အစိုးရ အဖြစ် ဝင်ထွက်သွားလာပြီး အာဖဂန်ကို ကိုယ်စားပြုခွင့် ရသွားမှာလား ဆိုတာ စောင့်ကြည့် ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကုလမှာ နိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုခွင့်ရဖို့ ဘာလို့ အရေးကြီးတာလဲ
ကုလ အထွေထွေ ညီလာခံမှာ နိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုခွင့် ဘယ်အဖွဲ့ကို ပေးမလဲ ဆိုတာ ဆုံးဖြတ် အတည်ပြုတာဟာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ အစိုးရ အဖြစ် ဘယ်အဖွဲ့ကို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေက အသိအမှတ် ပြုသလဲ ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်မျိုးထိ သက်ရောက်တယ်လို့ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေး ပညာရှင်တွေ၊ သံတမန်ရေးရာ ကျွမ်းကျင်သူတွေက ပြောလေ့ ရှိပါတယ်။
စစ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်း ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ ပြည်သူရဲ့ ရွေးကောက် တင်မြှောက်မှု ကနေ တဆင့် တရားဝင်မှုကို ဆက်ခံပြီး ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတွေစဟာ လွှတ်တော် ကိုယ်စားပြု ကော်မတီ CRPH ၊ အဲဒီကနေ NUG ကြားကာလ အစိုးရ ဆိုပြီး ဖွဲ့စည်း ကြေညာ ထားပါတယ်။
CRPH/ NUG နဲ့ကြား ဆွေးနွေးတာတွေ၊ အားပေးတာတွေ၊ သံခင်းတမန်ခင်း ဆက်ဆံရေး ထားရှိတာတွေကို ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတွေက ပြုလုပ် ပြသပေမယ့် NUG သာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တရားဝင် အစိုးရ ဆိုပြီး ကြေညာတာမျိုးတွေ မလုပ်ပါဘူး။
တနိုင်ငံချင်းက အဲဒီလို လုပ်ဖို့ ခက်မယ် ဆိုပြီး ကုလ အထူးသံ မစ္စ ရှရနာ ဘာဂနာက ပြောဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခု အရည်ချင်းစစ်ကော်မတီရဲ့ ထောက်ခံချက်ရပြီး ကုလ အထွေထွေ ညီလာခံမှာ နိုင်ငံကို ကိုယ်စား ပြုခွင့်ရဖို့က အရေးကြီးတယ် လို့လည်း မစ္စ ရှရနာ ဘာဂနာက ထောက်ပြဖူးပါတယ်။
အာဆီယံ အထူးသံ ပြောနေပြီး စစ်ကောင်စီကလည်း မငြင်းဘူး ဆိုတဲ့ အပစ်ရပ်ရေး
NUG နဲ့ တွဲပြီး အလုပ်လုပ်နေသူ ဦးကျော်မိုးထွန်း
ဦးကျော်မိုးထွန်းက ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အရကို အရေးပါတဲ့ နေရာကို ရောက်လာ
NUG ဘက်ကလည်း လက်ရှိ ကုလဆိုင်ရာ မြန်မာ သံအမတ် ဦးကျော်မိုးထွန်းကိုပဲ မြန်မာကို ကိုယ်စားပြု သူ အဖြစ် ဆက်လက် တင်သွင်းမယ်လို့ နားလည်ရပါတယ်။
NUG ဟာ ပြည်တွင်း ခုခံကာကွယ်ရေး စစ်ရေး လမ်းစဥ်ကို ကြေညာလိုက်ပေမယ့် ကုလမျက်နှာစာမှာ နိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုခွင့်ရရေး သံတမန် အားပြိုင်ပွဲကိုလည်း အလေးအနက် ဆက်ထားပြီး လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ NUG ရဲ့ ကက်ဘိနက် အဖွဲ့ဝင် လူ့အခွင့်အရေးဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးအောင်မျိုးထွန်းက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကုလဆိုင်ရာ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ဦးကျော်မိုးထွန်းဟာ စစ်အာဏာသိမ်းခံရတဲ့ ဖေဖေဝါရီ မကုန်ခင်မှာပဲ ကုလအထွေထွေ ညီလာခံ အစည်းအဝေးမှာ သူဟာ စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်ကြောင်း၊ စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံတွေက ဝိုင်းဝန်ပြီး အပြင်းထန်ဆုံး ကန့်ကွက် တုံ့ပြန် အရေးယူကြဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။
CRPH ရဲ့ စာကို ဖတ်ပြီခြင်းအားဖြင့် သူဟာ ဘယ်အဖွဲ့နဲ့ အဆက်အစပ် ရှိတယ်၊ ဘယ် အဖွဲ့ကို ကိုယ်စားပြုတယ် ဆိုတာကို ဦးကျော်မိုးထွန်းက ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံတွေ အလည် ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် ပြသခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးကျော်မိုးထွန်း လက်ညှိုး ၃ ချောင်း ထောင်လိုက်တာဟာ အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီ အတွက် နိုင်ငံတကာ မျက်နှာစာ၊ ကုလ စင်မြင့်မှာ အကြီးမားဆုံး ထိုးနှက် ခံရချက် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါတင်မက ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတွေ အဓိကကတော့ CRPH နဲ့ နောက်ပိုင်း NUG အတွက် တရားဝင် အစိုးရ အဖြစ် ကုလမှာ အသိအမှတ် ပြုခံရရေး၊ ကုလမှာ နိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုခွင့် ရရှိရေးဟာ လက်တွေ့ ဖြစ်နိုင်တဲ့ အရာတစ်ခု၊ လက်တကမ်းမှာ ရှိနေတဲ့ အရာတစ်ခု ဖြစ်လာ စေပါတယ်။
အကြောင်းကတော့ စစ်ကောင်စီ တင်သွင်းတဲ့ ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ကိုလည်း လက်မခံ၊ NUG တင်သွင်းတဲ့ ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ကိုလည်း လက်မခံ၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ကို ရွှေ့ဆိုင်းမယ် ဆိုပြီး (အာဖဂန်အရေး ၁၉၉၆ ကနေ ၂၀၀၀ အထိ ဖြစ်ခဲ့သလိုမျိုး) ဖြစ်လာခဲ့ရင်တောင် လက်ရှိသူ ဦးကျော်မိုးထွန်းကပဲ ဆက်ပြီး ယာယီ ကိုယ်စားပြုခွင့် ရရှိနေမယ့် အခွင့်အရေး ရှိနေပါတယ်။
ဒီတော့ လက်ရှိ ကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်မိုးထွန်းဟာ စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်တဲ့သူ၊ NUG နဲ့ တွဲပြီး အလုပ်လုပ်နေသူ ဖြစ်တာကြောင့် ကော်မတီက မဆုံးဖြတ်ပဲ defer လုပ် ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ရင်တောင် NUG အတွက် သံတမန်ရေး အားသာချက်အဖြစ် SAC-M အဖွဲ့လို ကုလအရေး ကျွမ်းကျင်သူတွေက ရှုမြင်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့်လည်း ဦးကျော်မိုးထွန်း အသက်အန္တရာယ်ကို ခြိမ်းခြောက် ဖိအားပေးမှုမျိုးတွေ ဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ အကဲခတ်တွေက ယူဆ ထားပါတယ်။ ဦးကျော်မိုးထွန်းကို ရန်မူ ခြိမ်းခြောက် နာကျင်စေအောင် ပူးပေါင်း ကြံစည်မှုနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား နှစ်ယောက်ကို အမေရိကန် အထူး စုံထောက် အဖွဲ့ FBI က ဖမ်းထားပါတယ်။
အဲဒီသူတွေရဲ့ ဝန်ခံချက်တွေ အရလည်း ဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့ ကုလသံအမတ်နေရာ အတွက် ကြံစည်ရကြောင်း ထွက်ဆိုထားတယ်လို့ FBI က ထုတ်ပြန် ထားပါတယ်။
နိုင်ငံတကာ မျက်နှာစာမှာ လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ အမျိုး ညွန့်ပေါင်း အစိုးရ NCGUB
အရင် စစ်အစိုးရ အဆက်ဆက် လက်ထက် ကုလနေရာကို အပြိုင် စိန်မခေါ် ခဲ့ဘူးလား
အရင်စစ် အစိုးရ အဆက်ဆက် လက်ထက် ၁၉၉၀ ပြည့်ကျော်နှစ်တွေက စပြီး ဦးသိန်းစိန် လက်ထက်မတိုင်ခင် အထိ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲကနေ တဆင့် တရားဝင်မှုကို ခံယူထားတဲ့ အဝေးရောက် ညွန့်ပေါင်း အစိုးရနဲ့ ၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ နိုင် အမတ်တွေ ပြည်မမှာ အခြေစိုက် လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။
သူတို့ အနေနဲ့ ကုလမှာ နိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုခွင့်ကို နဝတ နအဖ စစ်အစိုးရတွေ နဲ့ အပြိုင် စိန်မခေါ် ခဲ့ဖူးလား၊ ဘာလို့ မအောင်မြင်ရသလဲ ဆိုတဲ့ အချက်တွေကလည်း စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ်။
အဲဒါတွေကို အရင် မပြောခင် ကုလ ဆိုင်ရာ ကိုယ်စားပြု နိုင်ငံရဲ့ အမြဲတမ်း ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ နာမည်စာရင်းကို ကုလအထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးကို ဘယ်သူတွေက တင်သွင်းရမယ် ဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ စည်းမျဥ်းတွေ ရှိပါတယ်။
နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံ အကြီးအကဲ သို့မဟုတ် အစိုးရ အကြီးအကဲ ဒါမှမဟုတ် အနည်းဆုံး နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးက လက်မှတ်ထိုး ထုတ်ပြန်ပြီး အမည်စာရင်း တင်သွင်းရတာပါ။
အဲဒီလိုမျိုး ဘယ်သူက တင်သွင်းတာလဲ၊ ကိုယ်စားပြုမှုဟာ ကုလရဲ့ ပဋိဉာည် အခြေခံ အချက် ဖြစ်တဲ့ ကမ္ဘာ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို အထောက်အကူ ပြုမှာလား စတာတွေကို အရည်အချင်းစစ် ကော်မတီ Credentials Committee က အဓိက ဆန်းစစ်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၉၀ ပြည့်ကျော်နှစ်တွေကစပြီး နိုင်ငံတကာ မျက်နှာစာမှာ လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ အမျိုး ညွန့်ပေါင်း အစိုးရ NCGUB ရဲ့ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး အဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ ဦးဘိုလှတင့်ကတော့ အဲဒီအချိန် NCGUB ရဲ့ အန္တိမ နိုင်ငံရေး ရည်မှန်းချက်နဲ့ အခု NUG ရဲ့ ရည်မှန်းချက် မတူညီဘူးလို့ ဘီဘီစီနဲ့ မေးမြန်းခန်းမှာ ပြောပါတယ်။
အဲဒီတုန်းက NCGUB ဟာ နိုင်ငံတကာမှာ ဆော်ဩနေတာ ၃ ပွင့်ဆိုင် ဆွေးနွေးရေး ပေါ်ထွန်းလာဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်တပ်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့ နိုင်ငံရေး အင်အားစုနဲ့ တိုင်းရင်းသား အင်အားစုတွေကြား ဒိုင်ယာလော့ဂ် ပေါ်ထွန်း လာဖို့ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
NCGUB ရဲ့ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး အဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ ဦးဘိုလှတင့်
ကုလမှာ နိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုခွင့် ရရေး သွားလိုတဲ့ ၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ နိုင် အမတ်တွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဦးဘိုလှတင့်ရဲ့ ပြောဆိုချက်အရ NCGUB နဲ့ အဲဒီ အမတ်တွေနဲ့ကြား သဘောထား ကွဲလွဲမှုတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။
SAC-M အဖွဲ့ရဲ့ စစ်တမ်းထဲမှာလည်း ၂၀၀၈ တုန်းကဆိုရင် ၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ နိုင်သူတွေထဲကနေ ကုလမှာ ကိုယ်စားပြု ခွင့်ရဖို့ အဲဒီတုန်းက စစ်အစိုးရနဲ့ အပြိုင် ကြိုးစားခဲ့ဖူးကြောင်း ဖော်ပြ ထားပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အထက်မှာ ပြောထားတဲ့ အတိုင်း လျှောက်ထားသူဟာ နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံ အကြီးအကဲ သို့မဟုတ် အစိုးရ အကြီးအကဲ ဒါမှမဟုတ် အနည်းဆုံး နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဖြစ်ရမယ် လို့ ကုလစည်းမျဥ်း ရှိတဲ့ အတွက် ၉၀ အမတ်တွေရဲ့ လျှောက်ထားမှုဟာ ထည့်သွင်း စဥ်းစားခံရတာမျိုး မရှိခဲ့ဘူးလို ဆိုပါတယ်။
အခု အခါမှာတော့ NUG ရဲ့ နိုင်ငံရေး ရည်မှန်းချက်ဟာ ရှင်းလင်းပြီး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး လိုင်းမဟုတ်ပဲ စစ်အာဏာရှင် စနစ် အမြစ်ဖြတ်ရေး ဖြစ်တယ်လို့ ဦးဘိုလှတင်းက ဆိုပါတယ်။
NUG အနေနဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒကို ကျော်လွန်ပြီး စစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့ကြား ဆွေးနွေးတာမျိုး လုပ်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ထုတ်ပြန်နှင့်ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ် စက်တင်ဘာ ၇ ရက်နေ့မှာပဲ ပြည်တွင်း စစ်ရေး လမ်းစဥ် တော်လှန်ရေး လမ်းစဥ်ကို NUG က ကြေညာခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလက်ရှိ NUG ကတော့ တရားဝင် အစိုးရအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခွင့် ရလာဖို့ နိုင်ငံတကာမှာ ဆော်ဩလှုပ်ရှားနေပြီး၊ အခု ကုလအထွေထွေ ညီလာခံ UNGA မှာလည်း သူတို့ရဲ့ ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ နေရာရဖို့ ကြိုးစား နေပါတယ်။
NUG ရဲ လျှောက်ထားမှု၊ အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီရဲ့ လျှောက်ထားမှု နှစ်ခုစလုံးကို လက်မခံပဲ ဆုံးဖြတ်ချက် ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ရင်တောင် အရင် အဖြစ်အပျက် သာဓကတွေအရ NUG နဲ့ လက်တွဲနေတဲ့ ဦးကျော်မိုးထွန်းပဲ ကုလဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး အဖြစ် ဆက်ရှိနေလိမ့်မယ် ဆိုပြီး ကျွမ်းကျင်သူတွေက သုံးသပ် နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်သူကိုမှ မပေးပဲ မြန်မာအတွက် နေရာမှာ ခုံအလွတ် ထားဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့ နိုင်ငံကိုပါ ကုလအဖွဲ့ဝင်နေရာက ဆိုင်းငံ့တဲ့ သဘောမျိုးထိ သက်ရောက်တဲ့အပြင် ကုလပဋိညာဥ်နဲ့လည်း မကိုက်ညီတဲ့ အတွက် ဆုံးဖြတ်ဖို့ အင်မတန်ခက်တယ် ဆိုပြီး SAC-M အဖွဲ့က ဆိုပါတယ်။
อัลบั้มภาพ အာဖဂန်နစ္စတန်အရေး ကုလဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ မြန်မာ့အရေးကို ယှဥ်တွဲ ဆန်းစစ်ခြင်း